संक्रमण दर वृद्धिसँगै अक्सिजनको माग दोब्बर, अभाव नहुने व्यवसायीको आशा
शुक्रबार, साउन २९, २०७८ १०:२०
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर वृद्धि हुँदै गएपछि काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरका अस्पतालहरु भरिन थालेका छन् । याेसँगै फेरि अक्सिजन आपूर्तिको चिन्ता सुरु भएको छ । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
कारोनाको दोस्रो लहरका बेला अक्सिजनको हाहाकार नै भएको थियो । कोरोनाका विरामीहरुको उपचारमा अक्सिजन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले माग उच्च भएको थियो र, मागबमोजिम आपूर्ति हुन सकेको थिएन । अहिले तेस्रो चरणको त्राश बढ्दै जाँदा फेरि माग बढ्न थालको व्यवसायीहरु ले बताएका छन् ।
नेपालमा पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक ३ हजारभन्दा धेरै कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिइरहेका छन् भने २० देखि ५५ जनासम्मको मृत्यु भइरहेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको छ । अक्सिजन उत्पादक उद्योगीहरुले पछिल्लो समय अक्सिजनको माग वृद्धि भएको बताएका छन् । दोस्रो लहर सकिएपछि अक्सिजनको माग सामान्य अवस्थामा भरेको थियो । अहिले त्यो सामान्यभन्दा दोब्बर माग रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
दोस्रो लहरको कोरोनाको समयमा अक्सिजन अभाव भएर विरामीका आफन्तहरु अक्सिजन उद्योगमा नै गएर लाइन बस्ने गर्थे । सरकारले उपत्यकाका सबै अस्पताललाई अक्सिजनको कोटा नै तोकिदिएको थियो । पछिल्लो समय पनि कोरोनाका बिरामी वृद्धि भइरहे पनि त्यही अवस्था दोहोरिन सक्ने चिन्ता छ ।
एभरेष्ट अक्सिजन उद्योगका सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण कम भएपछि विस्तारै अक्सिजन माग कम भएको थियो । तर अहिले अक्सिजनको माग वृद्धि भएको उनले बताए । घिमिरेले भने, ‘पछिल्लो समय अक्सिजन ग्यासको माग वृद्धि भएको छ । तर पहिलेको जस्तो अभाव अब नहोला भन्ने आशा छ ।’
घिमिरेसँग नयाँ र पुराना १० हजार अक्सिजन सिलिन्डर छन् । पहिले ५ हजार मात्रै अक्सिजन सिलिन्डरको माग रहेकोमा अहिले पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भइरहेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय धेरै अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेका छन् । ती प्लान्टबाट पनि अक्सिजन उत्पादन भई प्रयोगमा आउने छन् । डाक्टर र अस्पतालको अभावले कोरोनाका विरामीहरुलाई समस्या पर्न सक्ने भएकाले पहिले नै तयारी गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् ।
अक्सिजन उत्पादक संघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र साघांईले पनि अक्सिजनको माग वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय कोरोनाका विरामी वृद्धि भएर नै अक्सिजनको माग क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर मात्रै अक्सिजनको मागबारे थाहा हुने छ ।’
अक्सिजन किन महत्वपूर्ण ?
कोभिडका बिरामीको गम्भीर अवस्था हुँदा फोक्सोले काम गर्न छोड्ने भएकाले अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । ‘फोक्सोले काम गर्न छोड्दा शरीरका अरु अङ्ग पनि ड्यामेज हुन सक्छन् । त्यसैले, यसबाट बचाउनका लागि बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यक पर्छ,’ पुनले भने ।
कोभिडसँगै नियमितरूपमा दम, निमोनिया तथा अपरेसन गरेका बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक पर्छ । बिरामीको अवस्थानुसार अक्सिजनको मात्रा आवश्यक पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । कोभिडका बिरामीहरूलाई अन्य बिरामीको तुलनामा अक्सिजनको बढी आवश्यक पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा २२ वटा अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालमा रहेका छन् । नेपालमा ६.५ र ७ क्यूभी लिटर अक्सिजन ग्यास अस्पतालमा प्रयोग हुने गरेको छ । भने १.५ क्यूभीको सिलिन्डर प्रायः घरमा प्रयोग हुन्छ ।
१.५ क्यूभी अक्सिजनको ग्याससहित करिब ८ हजारदेखि १२ हजार रूपैयाँसम्म पर्छ । यसमा अक्सिजनको मूल्य भने २५० रुपैयाँ मात्रै हो । खालि सिलिन्डर फिर्ता गरेपछि अक्सिजनको पैसा काटेर अरु पैसा बिक्रेताले फिर्ता दिन्छन् । बिरामीको अवस्था हेरेर ६ देखि ८ घन्टासम्म अक्सिजन प्रयोग गर्न सकिन्छ । अक्सिजन उद्योगअनुसार मूल्य तलमाथि छ ।